Claude Bernard University Lyon 1 - Ọmụmụ na France, Europe
Echefukwala discuss Claude Bernard University Lyon 1
Claude Bernard Lyon 1 bụ a mahadum na-enye ezi ihe maka 40,000 ụmụ akwụkwọ a n'afọ ke ubi nke sayensị na technology, ahụ ike na egwuregwu. Claude Bernard Lyon 1 is part of Université de Lyon, ndị kasị mkpa French University saịtị n'èzí Paris region.
Na ọ malitere ịchị a siri ike ọgụgụ isi aha ma na France na gburugburu ụwa, Claude Bernard Lyon 1 University na-na-pushing ókè nke ihe ọmụma,-akwalite mmụta site research na mgbe niile na-agba ume mkparịta ụka n'etiti sayensị na otu.
Claude Bernard Lyon 1 bụ a University maka ibi ndụ n'ụzọ zuru ezu. ya campuses, emi odude ke esịt nke pụtara ìhè region, na-na; ebe na ọtụtụ ihe omume, enyere ụmụ akwụkwọ aka ịzụlite na imeta a n'echiche nke onwe onye mmezu. The University Lyon 1 na nsogbu on 13 iche iche na saịtị na anọ n'ime isi ógbè ndị ọrụ nke Rhône-Alpes n'ógbè France : obodo nile nke Lyon, Saint-Étienne na Bourg-en-Bresse na obodo nke Roanne. The University n'ụzọ dị ukwuu-eme ka mmepe nke mpaghara a site na mmekọrịta na mpaghara na mba na ụlọ ọrụ ndị na mpaghara ọchịchị.
Lyon 1 mîdaha 2900 onye nkụzi /-eme nnyocha na ndị nkụzi, nke 700 na-ụlọ ọgwụ practitioners nakwa dị ka a oru na nhazi mkpara nke 1800. Lyon 1 ghọrọ onye kwurula oruru on 1st January 2009 na na a ngụkọta ego nke 405 m € Lyon 1 bụ otu n'ime ndị kasị n'ọrụ nke region.
A ụtọ anabata mahadum, na ọmụmụ na-ederịta akwụkwọ ozi nke ọha mmadụ mkpa
Lyon 1 si na-amụrụ bi bụ nke fọrọ nke nta 40.000. 54% nke a bi bụ nwaanyị na 18% enweta a na-amụrụ ihe nye. Lyon 1 dịkwa mpako gụọ a nnukwu nkezi nke mba ọzọ ụmụ akwụkwọ (10,5% nke ya ụmụ akwụkwọ, nke 134 mba).
fọrọ nke nta 80% nke ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ ọrụ aka mmemme : Lyon 1 na-arụpụta adịghị ala karịa 9250 -agụsị akwụkwọ kwa afọ.
The ọmụmụ na mmemme na-enye na ahụ ike na sayensị ikike iche-enye ohere ka ozuzu oke nke ahụ ike na Ọrụ (dọkịta nke nkà mmụta ọgwụ, ọgwụ, dọkịta ezé, nwayi nke nēle ime) na paramedical Ọrụ (audioprosthesist, ergotherapist, physiotherapist, okwu therapist, orthoptist, physiotherapist pụrụ iche na psychomotor mwekota).
Lyon 1 si sayensị ndi oru nakwa awade a sara mbara nhọrọ nke na-achị: na DUT ubre-enye ọzụzụ na 17 ebe nke nka maka ọdịnihu oru oru. 57 ọrụ aka Bachelor si degrees kwadebe ụmụ akwụkwọ maka n'etiti management ọrụ. 111 nwe-degrees (ọrụ aka, reasearch ma ọ bụ jikọtara ọrụ aka na reasearch) kwadebe ụmụ akwụkwọ maka agadi management ọrụ ma ọ bụ n'ihi na ọrụ na nnyocha na mmepe. Lyon 1 nakwa awade a dị nnọọ elu ụkpụrụ nke pụrụ iche ọzụzụ n'ọrụ nkà na engineering (Polytech Lyon) na actuarial sayensị (Isfara).
L'ESPE, onye nkụzi ọzụzụ oruru-pụrụ iche na ndị ọrụ aka nkwadebe nke bụ isi na sekọndrị nkụzi (nke niile na-achị).
Lyon 1 awards 300 doctorates a afọ iji ụmụ akwụkwọ na ha ga-arụpụta resarch ọmụmụ, ekenịmde ke mahadum laboratories, na imekọ ihe ọnụ na onye òtù ọlụlụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ na izi establishments.
Nakwa dị ka na-enye a dịgasị mbụ Undergraduate ọmụmụ ihe omume, Lyon 1 esokwa onwe ha ma ọ bụ ụlọ ọrụ kụziri ụmụ akwụkwọ na-aga n'ihu ọkachamara mmepe ọzụzụ.
The arụsi ọrụ ike ume ọhụrụ
Lyon 1 na-a multidisciplinary mahadum bụ ọkachamara ma isi na etinyere nnyocha na dị ka ndị dị otú ahụ, o nwere ike nyaa isi ihe karịrị 4415 mba bipụtara isiokwu na 44 Ikike nchọpụta Kemịkalụ kwa afọ. The University nwere 68 ala-kwụrụ ụgwọ nnyocha nkeji na-arụ ọrụ na atọ ubi; ahụ ike, gburugburu ebe obibi na ihe onwunwe teknụzụ. A ụfọdụ ọtụtụ ndị a nkeji bụ n'ihi na mkpakọrịta nke ọtụtụ laboratories n'ime nnyocha ụyọkọ. Nke a na-enyere ndị a mkpokọta owuwu nwere a ukwuu wider ubi nke nka na ohere, ma ọ bụ zuo nke, elu arụmọrụ ji eme nchọnchọ karịa ga-ekwe omume ka onye owuwu.
The University si onwe oru ọrụ intermediaries, EZUS Lyon1 na Lyon Engineering Project (egbugbere ọnụ) enyere Lyon 1 si laboratories iji zaghachi ihe ịga nke ọma na-oku na obi maka mba na mba research contracts.
Mba na mba kwetara
The University-agba mbọ ka ihe karịrị 80 European Union oru ngo na atụ ifịk ifịk ke The Seventh Framework Programme maka Research na Technological Development (FP7).
The mba ọnọdụ nke Lyon 1 dị ka a center nke kacha mma maka nnyocha nso nso a gosiri:
site nkwado ego na University ọdịda site na National Agency for Research,
site University si na-ekere òkè thematic Network maka Advanced Research akpọ Therapeutic innovations na Infectiology,
nakwa dị ka thematic Centres maka Research na Healthcare: Neurocap (neuroscience), Centaure (ngwa transplantation) na Synergie Lyon Cancer
na Institut CarnotI @ L: iga na ihe sayensị.
Tinye ka a 6 research ụyọkọ ke ubi nke ahụ ike na sayensị (Lyonbiopole), nanotechnology (Minalogic), onwu na gburugburu ebe obibi (axelera), plasturgy (Plastipolis), textiles (Techtera), egwuregwu (Sporaltec) na ọha iga (Lyon Urban Truck na ụgbọ ala 2015).
Ị chọrọ discuss Claude Bernard University Lyon 1 ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Claude Bernard University Lyon 1 ukara Facebook